घुम्न गए बापत थप एक महिनाको तलब सुविधा ! « Nijamati Khabar
घुम्न गए बापत थप एक महिनाको तलब सुविधा !
धनुषा, २४ कात्तिक । प्रदेश २ मा कार्यरत्त निजामती कर्मचारीहरुले अब घुम्न जाँदा पनि थप एक महिनाको तलब सुविधा पाउने भएका छन् । भएका छन् । प्रदेश २ सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यले आन्तरिक पर्यटनमा जाँदा एक महिनाको थप तलब सुविधा पाउने कानुन बनाएको हो ।
सबै निजामती कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउन सक्ने छैनन् । यो सुविधाका लागि प्रदेश २ मा कम्तीमा ६ महिना काम गरेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा लेखिएको छ प्रदेश निकायमा हाजिर भएर ६ महिना सेवा पूरा गरेका संघीय तथा प्रादेशिक निजामति कर्मचारीहरु यस निर्देशिका बमोजिमको आन्तरिक पर्यटनमा सहभागि हुन सक्नेछन् ।
प्रदेश नम्बर २ को आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२२ ले दिएको नीतिगत अधिकार प्रयोग गर्न प्रशासकीय कार्यविधि ९नियमित गर्ने ऐन २०७५ को दफा नम्बर २ बमोजिम प्रदेश सरकारले यो निर्देर्शिका बनाएको जनाएको छ ।
प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीका अनुसार प्रदेश २ मा पर्यटन प्रवर्द्धन, कर्मचारीलाई स्थायित्व राख्ने उद्देश्यले निर्देशिका प्रदेश सरकारले बनाएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै यो कुरा उल्लेख गरेको थियो ।